New Sage Kirasi Game Yave kuwanikwa muBlack Desert Mobile
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » New Sage Kirasi Game Yave kuwanikwa muBlack Desert Mobile
Pearl Abyss yakazivisa nhasi kuti inonakidza Sage kirasi yave kuwanikwa muBlack Desert Mobile. Vhiki rino, Vafambi vanogona zvakare kutarisira kutsva kwemutambo Atumach Skirmish, uko vatambi makumi maviri nevashanu vanoiswa mumapoka evashanu kukwikwidza kuwana mibairo.
Sage, Wekupedzisira Ancient, ikirasi-yemhando yekirasi uye ishe wenzvimbo uye nguva inoburitsa zvinoshamisa, simba rekuparadza. Achishandisa Kyve yakaita cube sechombo chake chikuru, anovhura mikaha muchadenga uye anodana Ator's Energy uye ruzhinji rwemashiripiti ane simba anogumbura.
Kugona kwake kwakasiyana kunobvumira Vafambisi kuedza nehunyanzvi musanganiswa uye kuwana nzira dzakasiyana dzekuwana ruoko rwepamusoro mumamiriro akasiyana ekurwa. Iyo diki-chombo, Talisman, zvakare inogonesa Sage kutora yemahara kuyerera fomu uye kufamba nekumhanya kunoshamisa kuburikidza nemaportals.
Unyanzvi hweSage hunosanganisira
• Rift Chain: Vhura portal kune imwe dimension nekuisa Kyve pedyo nemuvengi, wozodzora Kyve kuvhara portal nekudaro kukuvadza muvengi.
• Kutonga kweAtor: Dana simba reAtor kubva kumusoro, woritumira richirovera pamuvengi.
• Wormhole: Isa muviri wako munzvimbo yenguva pfupi yaKyve kuti ufambe zvakachengetedzeka pamusoro pechinhambwe chipfupi.
• Spatial Shatter: Ita kukuvadza kukuru kune vavengi nekuparadza nzvimbo yakavapoteredza.
Kupemberera kusunungurwa kwaSage, chiitiko chepamusoro-soro chiri kuitika kusvika Mbudzi 29. Vafambi vanokwidza Sage yavo kusvika padanho re70 vachawana mibairo yakakosha yakadai se1000 Black Pearls, Tier 7 Pet uye Legendary Costume Set Chest.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, avo vanoda kukwikwidza co-op kutamba vanogona ikozvino kunakidzwa neAtumach Skirmish chiitiko, nhandare yehondo umo 25 Vafambi vanoiswa mumapoka mashanu evanhu vashanu. Mapoka anozopokana mumwe nemumwe mutambo uchipera kana King Griffon akundwa. Pakupera kweSkirmish, vatori vechikamu vanogona kuwana Zvisimbiso zveAtumach vozvichinjanisa kuti vawane mibairo.